Uyifaka njani iLubuntu 16.04 Xenial Xerus | Ubunlog
Uyifaka njani iLubuntu 16.04 Xenial Xerus
UPablo Aparicio | | Lubuntu, Ubuntu
Ukuqhubeka nomjikelo wofakelo, namhlanje kufuneka sipapashe malunga uyifaka njani iLubuntu 16.04. Kutshanje ndithenge ikhompyuter engabizi kakhulu, kodwa enamandla ngaphezu kweAcer Aspire One D250 yam encinci. Ukuba bendingathenganga ethembekileyo, ngekhe ndisebenzise iLubuntu 16.04 njengenkqubo yokusebenza. I-Lubuntu isebenzisa i-LXDE njengendawo yayo yemizobo, eyenza inkqubo elula kakhulu esebenza kakuhle kwiikhompyuter ezithile. Kunye noXubuntu, yenye yezindululo zam xa ezinye iinkqubo zingasebenzi kakuhle njengoko besingathanda.
Njengoko senzile nezinye iinkqubo zokusebenza ukuza kuthi ga ngoku, kwesi sikhokelo sincinci siza kukubonisa indlela yokufaka iLubuntu 16.04 LTS Xenial Xerus kunye ne-os Siza kuncoma utshintsho oluthile, nangona uninzi lwazo lukwacebisa kwezinye iintlobo zobuntu. Kwakhona, iLubuntu ayinakwenziwa ngokwezifiso njengolunye usasazo, kodwa into inokuhlala yenziwe.
2 Uyifaka njani iLubuntu 16.04
Uyifaka njani iLubuntu 16.04
Nje ukuba i-USB ibhuntshe okanye i-CD ebukhoma ifakiwe kwaye iqale ukusuka kwenye yazo, siya kungena kwiLubuntu desktop, apho uza kubona indlela emfutshane eya kuqalisa ufakelo. Sinqakraza kabini kuyo.
Into yokuqala esiza kuyibona iya kuba lulwimi lofakelo, oluya kusivumela ukuba sikubone ukufakwa kulwimi lwethu kwaye, kamva, le nkqubo iya kuba kuleyo siyikhethileyo okwangoku. Sikhetha le siyifunayo kwaye ucofe ku «Qhubeka».
Ukuba asiqhagamshelelanga kwi-Intanethi, kwiwindow elandelayo iyakuxelela ukuba senze njalo. Kufanelekile ukwenza kwaye kufanelekile ngentambo, hayi nge-Wi-Fi. Nditsho kuwe kuba, njengoko benditshilo kumaxesha ahlukeneyo, kuya kufuneka ndenze uhlengahlengiso ukuze umqondiso wam unganqunyulwa.
Kwiwindow elandelayo sinokuzikhuphelela isoftware yomntu wesithathu, njengale iya kusivumela ukuba sidlale iiMP3, kunye nohlaziyo ngelixa sifaka. Ndincoma ukujonga zombini iibhokisi, kodwa ngakumbi ukufaka uhlaziyo ngelixa inkqubo ifakwa. Ukuba asenzi njalo, kuya kubakho izinto ezinokungasebenzi, ezinje ngenkxaso yolwimi lwethu.
Inqaku elilandelayo lelinye lezona zibaluleke kakhulu, kodwa into esiza kuyenza iya kuxhomekeka kwimeko nganye. Ukuba awunayo into efakiweyo, into enzima kodwa enokubaluleka ukuba, njengam, uyifaka kumatshini oqinisekileyo, uya kubona umfanekiso ngokuchanekileyo ngokulandelayo. Ukuba unayo enye inkqubo efakiweyo, uza kubona ezinye iinketho: ukuba awufuni ukwenza izinto nzima, kungcono ukhethe ukhetho lokucima yonke idiski kwaye uphinde ufake, uhlaziye inkqubo okanye, ukuba ubusele unayo iWindows, Sebenzisa ukhetho kwi-boot ezimbini. Ukusuka kukhetho "Olunye ukhetho" sinokukuxelela ukuba ungayifaka phi, kwangaxeshanye sinokwenza izahlulelo ezahlukeneyo.
Nje ukuba uhlobo lofakelo lugqityiwe, samkela ngokunqakraza "Qhubeka".
Sikhetha indawo yethu kwaye ucofe ku «Qhubeka».
Sikhetha ulwimi lwebhodi yezitshixo kwaye ucofe ku «Qhubeka». Ukuba asilwazi ubeko lwebhodi yezitshixo, singazifumanela yona ngokuzenzekelayo, nekuya kufuneka ucofe kuyo "Khangela ubeko lwebhodi yezitshixo" kwaye ucinezele amaqhosha acelayo.
Elinye lamanyathelo okugqibela iya kuba kukubonisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Nje ukuba kubonisiwe, nqakraza ku "Qhubeka".
Kwaye okokugqibela, sicofa u «Qala kwakhona».
Njengoko kungenakulungiswa njengenkqubo njengezinye iincasa ze-Ubuntu, ingcebiso endinokuyinika kulwabiwo olunje kukufikelela IZiko leLubuntu Software, ngenisa ithebhu "efakiweyo" kwaye ubone ukuba sifuna ukususa. Kwelinye icala, ndingafaka yonke into endiza kuyisebenzisa, njenge-GIMP, iShutter kunye noClementine.
Ngaba sele uyizamile? Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Lubuntu » Uyifaka njani iLubuntu 16.04 Xenial Xerus
UAlonso Alvarez Juarez sitsho
Akukho mathandabuzo ukuba iLinux yinkqubo yokusebenza yexesha elizayo
Phendula uAlonso Alvarez Juarez
Kwaye i-Intanethi yezinto
ami undinika ukusilela emva kokufaka kunye nokuqalisa kwakhona, ithi: / dev / sda1: clean, 124700/9641984 files, 1336818/38550272 blocks
Ndizamile amatyeli aliqela, ndibeka i-pendrive ngenkqubo efakiweyo, ifakwe kucinywe yonke into kwaye ifake imowudi kwaye xa ndiqala kwakhona nditshintsha ukhetho lwe-boot kwi-hard disk kwi-bios kodwa akukho nto ... impazamo efanayo rhoqo.
Jonga eyakho kukuxelela ngayo nayiphi na into ngaphandle kobuhle. Into emnandi kukuba undibambe kamnandi namhlanje, ndizokucacisa.
Ubona umyalezo kwaye ngokuzenzekelayo ucinga ukuba yimpazamo. Oku andazi ukuba kuyenzeka kuwe kuba ungasazi isiNgesi okanye ngenxa yokuba ungenalo ulwazi oluninzi lwekhompyuter, kodwa ngokusisiseko umyalezo uthi ulwahlulo «/ dev / sda1» lucocekile lweempazamo (ewe, ngokuchaseneyo wento ubuyicinga) sele ilandelayo ikubonisa inani leefayile kunye neebhloko ezizenzileyo, akukho nto iyenye, ndithetha ukuba, awunangxaki. Ngendlela, loo myalezo ubonakala kuthi sonke (ubuncinci kuzo zonke iikhompyuter zam).
Ukuqondwa, oku ngokungathi ukuphela kofakelo umyalezo "Ufakelo ugqityiwe ngempumelelo" uboniswa kwaye omnye uye athi: "Ndifumana impazamo ekupheleni kofakelo", xD
Enkosi ngokundicacisela, kodwa iscreen sihlala simnyama ngalo myalezo kwaye ukusuka apho awuphumi okanye uqalise kwakhona okanye nantoni na ekugqibeleni ndiyifakile i-15.10 ye-lubuntu kunye nokunethezeka ... ngendlela inqanaba lekhompyuter yam null uxolo
Ewe kuyamangalisa ukuba ayiqali, ke kufanele ukuba ibe sesinye isizathu sokuba ingasebenzi, kuba lowo ngumyalezo oqhelekileyo ovela xa i-ext3 / 4 isetyenziswa njengenkqubo yefayile. Ukuba usebenzisa umzekelo i-XFS ayiveli.
Ngendlela, uyakwazi ukulawula ukuqala kwe-Ubuntu 16.04 LTS LiveCD ngaphandle kweengxaki (Oko kukuthi, icandelo ledesktop)? okanye iyasebenza?
Yilaptop encinci ye-asus ngaphandle kwe-cd ene-processor ye-Intel Atom kunye ne-2 gb yenkunzi yegusha. Ndikwazile ukufaka i-15.10 ngependrive kwaye ihamba kakuhle ngenxa yoko andizukuyichukumisa kakhulu ndicinge ukuba Ubuntu 16 mabuthathe lukhulu kule mini-laptop. Enkosi kakhulu ngokuphendula
Kodwa masibone, nokuba ayinayo iCD, kule nto undixelela yona, ukhuphe i-LiveCD (ibizwa njalo ngaphandle komkhwa) kwi-USB. Kwaye ngendlela efanayo oqale ngayo u-15.10, ungaqala u-16.04 kwaye yiyo loo nto ikubuzile ukuba i-desktop ingayilayisha.
Kwakhona, xa ndisithi Ubuntu ndithetha nakuphi na ukwahluka kwayo (X / K / Lubuntu) ukuba ekugqibeleni ziyafana kodwa zine desktop eyahlukileyo.
ibimnyama, khange iqale nokuzama ngaphandle kokufaka. Ngaphambi kokuba ndinenguqulo ye-14.04 ye-lubuntu namhlanje ndizamile ukuvuselela nge-16 kodwa akukho thamsanqa.
Ngokuchanekileyo yile nto bendiyithetha. Ewe kufuneka kube kukungangqinelani nomqhubi wegraphic okanye into efana nayo, inyani kukuba eyakho inomdla ubuncinci.
akwenzeki kum…. Enkosi ngeXDDD, inyani kukuba ndiyenzile ilaptop encinci intle kakhulu.
Ewe yimpazamo, kwenzeka into efanayo kum, emva kofakelo olucocekileyo lomyalezo uvela kwiscreen esimnyama dev / sda5 ecocekileyo #### iifayile, #### iibhloko kwaye ukusuka apho akwenzeki, ayenzi nto , Iqala kuphela ngokubetha i-ctrl + alt + cima. Ndifundile ukuba kungenzeka ukuba inkxaso yemizobo ye-Intel ayiyifaki ngokungagqibekanga (ngakumbi kwiincwadi ze-net), ukusukela xa ukuqala inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kungena kwimowudi yemizobo esisiseko, into efana ne "windows safe mode"
Kudala ndisebenzisa uLubuntu ukusukela nge-12.04 kwaye khange ndibenangxaki, ngaphandle kwe-14.04 engakhange ifake inkonzo yenethiwekhi ngokuzenzekelayo.
Imichiza em250 netbook
Ndinengxaki efanayo kodwa sele ndiyisombulule, ndicacisa kule khonkco ilandelayo:
jonga, faka imo yokungaphumeleli kwisiphelo sendlela, chwetheza lo myalelo ulandelayo «sudo lshw» Iya kukucela iphasiwedi yomlawuli kulwazi ekubonisayo, jonga ireferensi kwi "Dispaly" kwaye ubone uhlobo lwe-chip, into efana le
inkcazelo: VGA isilawuli ehambelanayo
Imveliso: Isilawuli esiHlanganisiweyo seMizobo
umthengisi: Intel Corporation
i-id yomzimba: 2 »
Kuba unolu lwazi, google ukufumana uhlobo lomqhubi kunye nendlela yokulufaka.
Ingxaki kukuba umqhubi wevidiyo efakwe ngokungqubana okungagqibekanga wakuba uyifakile, iya kukuvumela ukuba usebenze ividiyo ngokuchanekileyo
Kwenzeka into efanayo kum, iyafaka kodwa ayihambi ngescreen esimnyama esinentsomi efanayo.
Njengoko besenditshilo ngaphambili, ndafaka i-lubuntu 15.10 ngenxa yeso sizathu uJavier, njengoko u-q3aql esithi mayibe luhlobo oluthile lokungangqinelani…. ukwazi ... kodwa kakuhle ngaphandle kokuba uyazi ukuba ayinguwe wedwa okanye akukho nto uyenzileyo, ndichithe imini yonke ndizama ukufakela emva kofakelo ndide ndibeke u-15.10
Ewe, xa uqala nayiphi na indlela yokuqalisa i-Bios Bug # 81 iyavela. Ingafakwa, kodwa xa sele iqalile kwakhona, umyalezo okhankanywe ngasentla uyavela kwaye akwenzeki apho.
Ndine-athomu ene-2Gb, ngomso siza kubona ukuba kwenzeka ntoni nge-15.10
15.10 ngaphandle kweengxaki 🙂 kuhamba kakuhle
Ewe, kuye kwafuneka ndifake iLubuntu 14.04 (ndiyayithanda inguqulelo yeLTS) kwaye yonke into ilungile. Kuyihlazo ukuba bendifuna ukuzama uLubuntu 16.04. Ngendlela le yenzeke ngayo kum kwi-Acer Aspire One Netbook ukusukela kwiminyaka emi-6 eyadlulayo, kungoko ndiyamangaliswa kukuba oko kungangqinelani kuba ngenxa yakudala akufuneki kube neengxaki ezininzi. Ngendlela, ndifake Ubuntu 14.04, Xubuntu 14.04, Manjaro, Linux Mint (andisayikhumbuli ingxelo) kunye neTrsiquel 7, endiyithandayo kodwa ngelishwa andikwazi ukuhambisa umfanekiso kwiprojektha ngoko ke kufuneka Lubuntu ...
Uxolo, impendulo yayiyeyeBelial, ndadideka ikhonkco.
Ekugqibeleni ndafaka iLubuntu 14.04, kwaye ngaphandle kweengxaki. Kodwa umyalezo weBios Bug ugcine uvela. Emva koko isebenze ngokufanelekileyo.
Kodwa ndaye ndagqiba kwelokuba ndifake Ubuntu Mate 16.04, ukubona ukuba yintoni, umyalezo we-BIOS ukwabonakala, kodwa ufakwe ngokuchanekileyo, kwaye yile ndiyisebenzisayo ngoku
Impazamo efanayo kunye nohlobo olufanayo. Masibone ukuba ndiyazama i-15.10. Impazamo ivele kunye nomqhubi ongenazingcingo.
I-Armando, i-Belial kunye ne-jimmijazz ungazama u "Enye indlela" ukuba iyasebenza, loo nguqulo ilayisha izinto ezimbalwa kwaye ndicinga ukuba ihamba ngaphandle kokukhawulezisa umzobo okwenziwe ngokungagqibekanga, kuba yeyekhompyuter enezixhobo ezimbalwa, mhlawumbi ezinokusombulula ingxaki yesiqalo . Ezi Isos zezi:
I-PS: Ngendlela, kwenzeka into efanayo kum ngencwadana yokubhala ye-Acer endiyiziswe ngumhlobo, ke nam ndiza kuvavanya ukuba iyasebenza ne "Enye into".
Khange isebenze kum: / Kodwa ndifake inguqulelo ye-15.10 kunye ne-great (Y)
Ewe, linda u-16.04.1
Okwangoku kunye ne-15.10 deluxe. Ngokoluvo lwam lokuthobeka, akufuneki ukuba ukungqinelana kunye nokulula kwezixhobo ezindala, ezinobuncinci bezinto ezikhoyo? Ndithetha ukuba uLubuntu kunjalo, ingxelo entsha iya kuba ntle kodwa ayindim ndedwa ongakuvumeli ukuba uyifake.
Kwi-ALTERNATE version andikwazi ukuqala ngaphandle kokufaka, kwaye andizange ndifake. Ndicinga ukuba ndiza kuhlala noMATE, okwangoku ndibona ukuba isebenza kakuhle
UJorge Cedi Medina sitsho
Ukufumanisa ukuba kutheni ikhompyuter yakho ingaqali, kuya kufuneka ujonge kwakhona izingodo, Ctrl + Alt + F1
Kubonakala ngathi kwiimeko ezininzi ayifaki ukufaka abaqhubi bekhadi levidiyo, ezifakwe nazo
Sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel (kwikhadi lemizobo ye-intel)
Phendula Jorge Cedi Medina
Xa ndizama ukufaka iLubuntu 16.04 LTS kwi-USB kwi-Acer Aspire One AOD250, iya kwimowudi yokulala rhoqo. Kuya kufuneka ndibethe isitshixo sendawo ukuze kukhanye kwakhona.
Inyani yile yokuba kuthatha incinci kakhulu ukubuyela kule ndlela, indithintela ekugqibeni ufakelo
Andazi ukuba kutheni le nto isenzeka
UYoshuwa 2 sitsho
Ingxaki ngeLubuntu 16.04 kukuba ngokungagqibekanga ayifaki iidrive ze-Intel, yiyo loo nto ingxaki.
Ukuba yincwadi yenethiwekhi kwaye sele siyifakile kodwa ayiqali, kufuneka siqale ngependrive yokufaka kwaye kwiscreen sokuqala sinika iF6 kwaye senze ukhetho lwe-nomodeet
Ukwenza oku kuqala kwimowudi ye-800 × 600. Kodwa nje ukuba siye apho sinokuya kwi-hard drive apho sifaka khona uLubuntu kwaye sijonge ifayile yegrub.cfg, eya kuthi ikwi / media / (disk uuid) / boot / grub ifolda
Sihlela igrub.cfg ngamalungelo engcambu kwaye apho sitshintsha apho 'kuthe cwaka' ngokubeka 'cwaka splash nomodeet'. Sigcina utshintsho, siqala kwakhona, sisusa ipendrive ukuze iyenze kwidiski enzima kwaye le yethu uLubuntu iya kuqala kwimowudi 800 × 600
Ukuyicombulula ngokuqinisekileyo le ngxaki ngemizobo, kufuneka ufake iidrafti ze-Intel ngalo myalelo:
Sudo apt-fumana ukufaka i-xserver-xorg-ividiyo-Intel
Nje ukuba sifakelwe ukuhlela igrub.cfg ifayile enamalungelo olawulo
Iphepha lesudo sudo /boot/grub/grub.cfg
kwaye apho sibeka khona 'cwaka i-nomodeset' sibeka 'cwaka' kwakhona kwaye sigcina utshintsho.
Emva koko siqala kwakhona kwaye igrafu kufuneka isebenze ngokuchanekileyo.
UJosan 2, enkosi kakhulu kodwa ayisebenzi kum.
I-netbook ibuyiselwe kwimowudi yokulala, i-hibernated okanye ndiyazi ...
Inyani yile yokuba ngalo mzuzu ithiyori iyaqala ukufaka inkqubo yokusebenza, ekungafuneki ukuba ibekho kwimowudi enjalo (ngokokubona kwam)
Into ehlekisayo kukuba ngeLubuntu 14.04 LTS ayenzeki kum
Ukuba kukho into eyenzekayo kuwe, ndixelele
Indinike impazamo kubuntu beqabane kwaye ayindivumeli ukuba ndisuke apho, indixelele ctrl + d ukulungisa into engalunganga kwinkqubo yefayile kwinto endizama ukuyilungisa ihlale apho kwaye ayikho enye into, ke Ndibuyisele yonke into Kodwa ngendlela eyahlukileyo ndiyazichaza ngeentsuku ndiye ndaqaphela ukuba ubuntu16.04 kunye nezinye iidesktops zine-bug xa zifaka kwimodi ye-LIVE nge desktop evulekileyo kwaye izahlulelo zifakelwe, ndiye ndaphinda ndazimisela kwakhona kwaye ndathi makangene kuphela ukufaka kwangoko ngaphandle kokungena kwidesktop kunye nokubeka isahlulelo kwaye isombululwe ingxaki, ndicinga ukuba ziinkqubo ezivulekileyo ezithintela ukucwangciswa ngokuchanekileyo kunye nokufakwa kobuntu kunye nokuphuma kwe-16.04 ke kwindlela emsulwa yokufaka ayiqhubeki zonke ezi nkqubo kwaye akukho iingxaki xa ufaka ndiyitsho kuba iimpazamo zenzekile kum kuzo zonke iimeko ezivela kubuntu, eqhelekileyo kde ukuya kwiqabane kwaye kubonakala ngathi yiyo loo nto ndizamile ngoluhlobo.
Kwelinye icala, impazamo ikwenzeka ukuba isombululeke kwaye yile nguqulelo ye-ubuntu 16.04 izisa ibug kumakhadi e-wifi awanqamayo kwaye abuye kwaye adibanise nenethiwekhi, kubonakala ngathi kukusilela kwenkqubo elawula uthungelwano ku-Ubuntu olubizwa ngokuba ngumphathi wenethiwekhi njengale ukuba kufuneka ufake enye eyenzayo efanayo kwaye ephuculweyo engazisi loo bug kwaye yi-WICD bayayenza ukufaka ngokufanelekileyo ukufaka i-wicd emva koko bafumane i-autoremove-manager-manager ukuqala kwakhona kwaye nini bengena kwidesktop bangena kwimenyu benza inkqubo ye-wicd ezisa i-wifi eluhlaza ivula uqhagamshelo kwi-wifi yakho abanika ukuba banxibelelane ne-wifis yabo ababeka iphasiwedi kunye ne-voila, banokuhamba ngaphandle kwengxaki.
Molo, kwenzeke into efanayo kum, ndine-msi L1300 mini netbook ene-atom n450 kunye ne-giga yenkunzi yegusha, ndihlala ndisebenzisa i-lubuntu ukusukela nge-12.04 kwaye nge-16.04 yeyokuqala ebendinengxaki nayo, ndafaka i-xubuntu 16.04 kwaye iyasebenza kodwa incasa yam iyacotha, ndiye ndagqiba ukufaka i-zorín 9 lite esebenzisa i-lxde kunye ne-lts kwaye inyani kukuba isebenza kakuhle kakhulu, ilunge ngakumbi kune-lubuntu 14.04. Ndizohlala ne zorín ke 😉
USergio Mejia sitsho
Molo, ndifake nje i-lubuntu 16.04 kwaye ndinengxaki zokudibanisa umshicileli wam, iyandixelela ukuba inkonzo ayixhunyiwe
Phendula uSergio Mejia
UCarlos Pretini sitsho
Molo emva kokufaka i-lubuntu 16-04 ndiphelelwe yi-wifi ibhaqa iinethiwekhi kodwa andikwazi ukunxibelelana ndibeka ipassword kwaye akukho nto kwaye ayisiyo counter engalunganga kuba kwilaptop yommelwane ene-lubuntu 15.10 iyasebenza idibanisa ngokukhawuleza
Ukuba ungandinceda ndiyabulela, Enkosi
Phendula uCarlos Pretini
Ngo-lubuntu 16.04.1 ingxaki leyo iphelile. Ngoku inokufakwa kwaye iqalwe kuyo nayiphi na ikhompyuter
Ndinengxaki nge-wifi kwaye ndizamile ukuqhuba umyalelo apt-fumana ukufaka i-wicd, kodwa ayisebenzi. Ndiye ndaya "kwiziko lesoftware kaLubuntu", ndafumana i-bug (ndicinga ukuba ithetha iphakheji) kwaye ukusuka kwibhasikithi ndayifaka. Ndaphinda ndaqala phantsi kwaye… voilà! Ndandinabaphathi benethiwekhi aba-2, ndayeka uqhagamshelo kwinethiwekhi ndaphinda ndadibanisa nomphathi "oluhlaza". Enye, ukuza kuthi ga ngoku, hayi fu! Okokugqibela, khange ndizame ukukhipha ipakethe yomphathi womnatha nge "apt-get autoremove network-manager", ndiyenzile ngokufunda ukusebenzisa "iSynaptic Package Manager" kunye nokukhipha (hayi ngokusisigxina, kwimeko) inethiwekhi- umphathi endimbonile ephawulwe.
Ulixolele ibali, kodwa okoko bendikhangela okwethutyana ngaphandle kokuqonda i-jargon esetyenziswe kwezi foramu zabantu baphambili, ngokuqinisekileyo umntu unenqanaba elifanayo le "dummie" kwaye ufuna isisombululo sokungalahli iLinux / GNU (unethemba loku zichanekile kokugqibela ukuba akunjalo, ndiyayeka i-octopus).
Ngaba uyayicebisa nge-Acer NX.G11EB.002 (Intel Celeron N3050; 2 GB DDR3L SDRAM; 32 GB SSD) ??
Iscreen sokuchukumisa sisaza kusebenza kakuhle kwaye lonke uqhagamshelo lwe-USB kunye neKhadi le-SD ??
Molweni nonke, ndinengxaki xa ndifaka i-lubuntu 16.10 inguqulelo yamva yale xa ukhetha kwaye usenza onke amanyathelo, akukho ngxaki kodwa inkqubo indinika le mpazamo I-GRUB INSTALLATION IFALELE lo ngumfanekiso http://subefotos.com/ver/?2630d993357183085cd0a7b1d7dc28e5o.jpg Andazi ukuba kwenzeka ntoni ndifuna ukuyifaka kwikhompyuter yelaptop ene-80 gb yediski enzima kunye ne-2 yenkunzi yegusha andazi ukuba mandenze ntoni ndizamile ngeLXLE elayishwe kakhulu, i-watt andiyifakanga, i-debian lxde ndiyakwazi hayi ngeSpanish, iitrisquel mini zokugcina ziphume kumhla andinakho ukufaka nantoni na, ipepermint ikwalayishwe kakhulu.
Ndiyaluxabisa uncedo lwakho nceda
Molo, ndizama ukufaka iLubuntu 16.04 kwi-ACER ASPIRE 5750G. Ndihlala ndifumana impazamo efanayo ngexesha lofakelo. Msgstr "Akukwazeki ukufaka iphakheji" grub-pc "kwi" / target / ". Inkqubo efakiweyo ayinakukwazi ukuqala ngaphandle kwe-GRUB boot loader.
Ndizicimile zonke izahlulelo, ndenze isahlulelo sePrayimari / sed / sda1 endisibeka njenge / nangaphakathi kwesahlulo esandisiweyo / sed / sda3 endisibeka njengekhaya kunye nokwahlula-hlula.
Ndenze itafile yokwahlulahlula entsha yohlobo lwe-msdos.
Kodwa iyaqhubeka isilela.
Ndizamile ukwenza ufakelo olungagqibekanga olususa yonke i-hard drive kwaye ifake yonke into kwisahlulelo esinye, kwaye ayisebenzi nokuba.
Nditshintshe itafile yokwahlula ukuba ichwetheze i-GPT. kwaye akukho nto konke konke.
Ndiyilungisile i-BIOS ukuze i-SATA ibe luhlobo lwe-IDE.
Andikwazi ukucinga ngenye into enokuyenza.
Into kukuba ukuba ndifaka Ubuntu, ufakelo lwenziwa ngesiqhelo, kodwa uLubuntu akukho ndlela.
Naziphi na izimvo ??
Yoshuwa ukuya sitsho
Molo ndinengxaki kwaye kukuba xa ndizama ukuqala i-lubuntu 14.04 kwi-dvd kodwa isikrini sihlala simnyama kwaye ukusuka apho akwenzeki, ndingathanda ukwazi ukuba ndingenza ntoni ukuyilungisa okanye ukuba i-dvd ibingalunganga itshisiwe?
Phendula joshua ku
faka i-lubuntu 16.04 kwaye isebenza kakuhle mhlawumbi inzima kancinci kune-14.04 ekuphela kwempazamo eyenzekayo kum ikwa-skype xa ufuna ukwenza umnxeba wevidiyo ngo-14.04 isebenze kakuhle, kule indixelela impazamo engaziwayo kwaye ibuyela komnye umntu kwinto enye yenzeka?
Molo, enkosi ngegalelo, kulungile ukuba akukho zimpazamo. Ndine-acer aspire 5720z endiyicime ngokupheleleyo i-HDD yokwenza ufakelo lweLubuntu. Inguqulelo ye-LIVe iyandisebenzela amaxesha ngamaxesha. ngamanye amaxesha nge icon yokufaka, ngamanye amaxesha ngaphandle kwayo, ngamanye amaxesha nge-bar yokuqalisa, kwaye ngamanye amaxesha ngaphandle kwayo. Into kukuba xa ndifumana yonke into igqibelele kwaye ndiyinika ukufakela, okwangoku "ndicinga ukuba" igqibile ukukopa kwaye iqala ukufaka (ndicinga ukuba i-grub kuqala) ikhompyuter iyacima. Ndizama ukuyiqala ngaphandle kofakelo lwe-usb kwaye indixelela ukuba akukho disk iqalayo, ukufaka idiski kwaye ucinezele iqhosha. (Kulapho nditsho khona ukuba yonke into iye esihogweni)
Ewe ngoku izinto endicinga ukuba ndiyazidinga: Zama ukuyifaka kwi-cd ukubona ukuba iyakuba yinto ye-usb endizamile ngayo.
Ndizamile ukufaka i-grub kwi-sda1 okanye i-sda2 (ukuyinyusa) inyani kukuba andiyiqondi le nto kodwa ndiyenzile ngokujonga incwadi. Kodwa i-sudo install-grub command ayisebenzi. ke andinakukwazi ukuyifaka ngaloo ndlela.
-Ukuba andinayo i-OS, ndingayifaka i-grub?
Ndidinga uncedo, sele nditshintshile ukusuka kwi-Hdd nje kwimeko enokuba yimpazamo. Ukuba umntu undinika naluphi na uphawu ndiya kuzaliswa lithemba.
Mva kwemini, umntu othile uyayazi indlela yokufaka iqela ngesandla kwisiphelo se-LXTerminal
ILubuntu 16.04 LTS ifika ngokusemthethweni kwiRaspberry Pi 2
Zonke iindaba zibandakanyiwe ku-Ubuntu 16.04 (i-Desktop kunye neServer)